Kirmoitalo: Room-8 in Salla, the arctic Lapland - I-Airbnb
Kirmoitalo: Room-8 in Salla, the arctic Lapland
Indlu ebizwa ngokuthi 'i-Kirmoitalo' isenkabeni ye-Salla, idolobha elincane/ umasipala e-Lapland, e-Finland. Njengoba sithi ngokuziqhenya: "Salla - Phakathi Nendawo" kanye "Nendawo Enhle Ngemvelo". Sizungezwe ihlane le-arctic lappish namahlathi amakhulu anamachibi amaningi nemifula. Idolobha litholakala cishe. 40km enyakatho ukusuka e-Arctic Circle. Woza futhi ujabulele ukuthula kwemvelo ebusika nasehlobo kanye nomoya ohlanzeke kakhulu waseYurophu. Amathegi: # LaplandFinland # VisitSalla # WinterWonderland
Usayizi wekamelo-8 cishe. 20 sqm. Kulungele umndeni: imibhede emibili yabantu abadala + umbhede oyisitezi wezingane ezimbili (usayizi we-140cm x 60cm, ukuphakama 100cm)
Isitezi sokuqala: Sinikeza indawo yokuhlala ehostela ezakhiweni zabantu abangu-16. Amakamelo angu-8/imibhede engu-16, enye yayo yifulethi lomndeni elinamakamelo angu-2 (amakamelo angu-5-6 ahlangene) nemibhede engu-3. Hlukanisa ikhishi negumbi lokudlela, i-sauna, amashawa amabili nezindlu zangasese ezine ezisetshenziswa yiwo wonke umuntu. Indlu eyakhiwe ngamapulangwe enendawo yomlilo evulekile ingaphandle egcekeni elingemuva. Ukupaka imoto kwamahhala. Ungabhukha ikamelo lobusuku obubodwa noma obuthile, amaviki noma izinyanga njengoba ufisa. Amasevisi esidlo sasekuseni nesidlo sasemini nesidlo sakusihlwa awaphoqelekile futhi ayatholakala ngesicelo nangamanani ahlukene.
Izinto ongazibona, ongazenza & OKOKUZITHOKOZISA
Woza ubone izibani zasenyakatho - aurora borealis - inkathi manje!
AMASEVISI: Indlu iseduze nenkaba yedolobha elincane. Izitolo ezimbili zokuthenga ukudla nezindawo zokudlela ezimbili, izitolo ezimbalwa, ibhange, umtapo wezincwadi, imnyuziyamu nehhovisi le-Salla Tourist Information - konke kuphakathi nemizuzu engu-10-15 ukusuka endlini.
EZEMIDLALO NEMVELO: E-Salla une-Salla Ski Resort eduzane ngebanga elingu-5min (amakhilomitha angu-10) - kanye nabanye abathathu ngebanga elifushane lokushayela (i-Suomu, i-Pyhä-Luosto ne-Kusamo). Jabulela ukuhamba ngezinyawo nokuqwala izintaba, ukutshuza eqhweni, ukutshuza eqhweni unqamula izwe, uhambo lokutshuza eqhweni, ukuhamba ngebhayisikili lasebusika, i-reindeer kanye ne- husky safaris ngendlela othanda ngayo.
Kukhona i-spa, i-SnowLounge, i-bowling alleys, ihholo leqhwa langaphakathi, ihholo lezemidlalo, isevisi yokuqashisa amabhayisikili yasezintabeni/inethiwekhi enhle kakhulu yemizila yokuqwala izintaba ephawulwe phakathi nemizuzu engu-5 ukusuka endaweni yethu. Sinezindlela zokushushuluza eqhweni ezingamakhilomitha angu-160 lapho zikhanya khona ezingu-43km.
AMAPAKI KAZWELONKE: Kunamapaki amane kazwelonke ngaphakathi kwehora elilodwa nje lokushayela ukusuka e-Salla (Oulanka, Riisitunturi, e-Pyhä-Luosto, Syöte).
Umngcele wokuwela emgwaqweni oya eRussia utholakala emakhilomitheni angu-22 ukusuka enkabeni yedolobha lase-Salla.
Imininingwane yezivakashi nesivakashi: Imininingwane ye-Salla TOURIST:
(Iwebhusayithi ifihlwe yi-Airbnb)
I-Salla Ski Resort: (Iwebhusayithi ifihlwe yi-Airbnb)
I-Salla Reindeer Park: (Iwebhusayithi ifihlwe yi-Airbnb)
Sizohlangana nawe lapho ufika futhi sibonise ikamelo lakho futhi sizungeze indlu ukuze sikwenze uzizwe usekhaya ngokushesha. Inombolo yocingo yesevisi engu-24/7 inikeziwe.